Miaraka amin'ny haingo kantony ity toerana miafina kely mahatalanjona ity dia hahatonga ny fijanonanao any Co. Kildare ho fahafinaretana. Lavender Cottage dia misy efitrano fandraisam-bahiny 2 (matory 4/5), samy misy farafara am-pandriana, ary ny iray misy efitrano fandroana en-suite. Misy lakozia misokatra malalaka, faritra fisakafoanana misy fandriana sofa fanampiny.
Lavender Cottage dia eo akaikin'i Newbridge miaraka amin'ireo kojakoja marobe ao aminy, toa ny ivon-toeram-pivarotana lehibe indrindra any Irlandy, ny trano fisotroana nentim-paharazana sy ny tobin-tsolika, trano fisakafoanana, sinema, zaridainan'ny renirano ary fitsangantsanganana ary ny toerana malalaka amin'ny Lemaka Curragh 15 metatra miala azy fotsiny.
Izay rehetra mety hangatahinao dia homena ao an-tranony, ao anatin'izany ny fahitalavitra zanabolana, mpilalao DVD, ary Wi-Fi maimaim-poana.
Ilay trano kely dia misy zaridaina mahafinaritra sy tsy misy tomika mahafinaritra manodidina ny trano. Misy faritra lehibe sy bozaka fanaka omena - toerana mahafinaritra hipetrahana amin'ny masoandro maraina. Betsaka koa ny toerana fijanonan'ny fiara manodidina ny trano bongo.
Na ho an'ny ankohonanao sy ny namanao na fialan-tsasatra ny fijanonanao dia tsy afaka mangataka fialan-tsasatra mahafinaritra kokoa ianao noho ny fahasarotan'ny fiainana be atao, nefa mila mijery fotsiny eo am-baravarankely ianao hahita ny ambanivohitra mahavariana manodidina anao.
Lakozia kely, Budget, Mpinamana, Newbridge
Newbridge, County Kildare, W12 HE93, Irlandy.